राममणि खनाल को हुन ? स्थानिय भन्छन् खनाल विनाको सौराहा सोच्नै सक्न्नि ! - Chitwan Online Khabar
२७ असार २०७८, आईतवार ०९:०८
चितवन । रत्ननगर नगरपालिका सौराहाका स्थानिय वासिन्दा राममणि खनाल राजनिति संगै समाज सेवामा सकिृय रहेका छन ।
खनाल समाज सेवा गर्दा राजनिति देखा पर्न नहुने वताउ छन । विचार आआफ्नो हुन सक्छ तर समाज सेवामा राजनिति जोड्न नहुने खनाल वताउ छन् । खनाल एक दर्जन भन्दा वढी संघसंस्थामा आवद्ध रहेका छन ।
विश्वलाई नै चुनौति दिइहेको कोभिडको कारण नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । यही समयमा राज्यका संयन्त्रमा रहेकाहरु जनताको दुखमा साथ दिनु पर्ने समयमा राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधि घरवाहिर न निस्केको समयमा पनि खनाल भने रत्ननगर ५,६ र ७ का स्थानियको घरघरमा पुगेर वस्तु स्थिति बुझदै अप्ठयारोमा परेकाको लागि खनाल भग्वानकै रुपमा स्थापित हुन सफल पनि हुनु भएको छ ।
खनालकै पहलमा यस क्षेत्रका करिव ५ सय घरपरिवारलाई कोभिडको समयमा राहात स्वरुप खाध्य सामाग्री सहयोग गर्नु भएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उप शाखा बछौलीका निवर्तमान सभापति समेत रहेका खनालको पहलमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखा परे संगै नागरिक सहायत कक्ष स्थापना गरेर उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग लिदै दुखमा परेकाको सहयोगमा निरन्तर लागि परेका छन् ।
खनालकै पहलमा बछौली स्वास्थ्य चौकीको भवन निमार्णको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत ५० लाख वजेट पर्न सफल भएको छ । भने सडक वोड मार्फत सौराहा क्षेत्रको नाला निर्माणमा पनि ५० लाख वजेट विन्योजित भएको छ ।
को हुन त राममणि खनाल
राममणि खनाल समाज सेवामा सकिृय छन् । खनाल वाल्यकालदेखि नै समाज सेवा भने पछि हुरुकै हुने गर्थे । उनका वाल्यकालका साथिहरुको स्मरणमा खनालले कसैको दुख पिर र गाउघरमा भएका साना साना कार्यक्रमहरुमा पनि पुगिहाल्ने गरेको उनका साथिहरुले वताउन गरेका छन् ।
खनाल विभिन्न प्रकारका दर्जन भन्दा वढी संघसंस्थामा रहेर आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएका छन । खनाल रेडक्रस,वन,होटल व्यवसाय, संरक्षण, विधालय लगायत विभिन्न संघसस्थामा सफल कार्यकाल सम्पन्न गर्नु भएको छ ।
खनाल २०६५ सालमा रत्नननगर ६ सौराहामा रहेको बाघमारा सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएर पर्यापर्यटन र संक्षणको क्षेत्रका ठुलो योग्दान दिनु भएका त्यस क्षेत्रका स्थानिय र संरक्षण संग सम्वन्धित संघसंस्थाले वताउने गरेका छन । खनाल मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिको सचिव भएर संक्षणको क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनु भएको थियो ।
उनै खनाल विधालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको समयमा आयोजित महायज्ञ मार्फ संकलित रकमवाट र राज्यको सहयोगमा बछौली माध्यामीक विधालयमा प्राविधिक शिक्षाको समेत सुभारम्भ भएको थियो ।
नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र चितवन सौरामा रहेको क्षेत्रिय होटल संघको कार्यसमिति सदस्य , महासचिव लगायत पदमा रहेर पर्यटन प्रवद्धनमा खनालको ठुलो योग्दान रहेको छ । खनाल हाल संघको प्रथम उपाध्यक्ष रहनु भएको छ ।
खनालकै पहलमा चितवनको सौराहा प्रवेशद्धार चित्रसारीमा आकर्षक प्रवेशद्धार निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राममणि खनालको जन्म चितवन जिल्ला साविकको बछौली गाविस वडा नम्वर ५ ,हाल रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्वर ६ दोरङ्गी गाउँमा २०२८ साल पुष १० गते भएको हो। पिता कोमलीकान्त र माता बालकुमारी खनालका माईला सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन राममणि खनाल ।
खनाल १५ वर्षकै किशोर अवस्थामा राजनीतिक चेतना आयो उनको राजनीतिक चेतना प्रजातान्त्रीक आन्दोलन प्रति भयो। खनालले राजनीतिक जीवन २०४८ साल देखि शुरू गरे। नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठनको ईकाई सदस्य बाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरू भयो ।
२०५३ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए। खनालले नेपाली काँग्रेस पार्टीको सदस्यता प्राप्ति पछि सक्रिय राजनीति थालेका खनालल स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका छन । २०५५ देखि २०५९ साल सम्म नेविसंघ चितवनको उपाध्यक्ष रहनु भएका खनाल २०५९ सालमा नेपाली काग्रेस क्षेत्रीय सचिव हुनु भएको थियो ।
खनालको राजनैतिक प्रति निरन्तर सकृयात वढ्दै गएको थियो । खनाल २०६६÷२०६८मा नेपाली काँग्रेस जिल्ला कमिटी सदस्य भएका थिए । भने २०६८को पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनु भएको थियो ।
उनै जनता विच निकै लोकपिृय सावित भएका नेता राममणि खनाल अहिले पनि सकिृय राजनिति संगै समाज सेवामा सकिृय रहनु भएको छ ।।